जेठ १४ पछि मुलुक नयाँ राजनीतिक धारमा अघि बढ्नेछ – Janaubhar
जेठ १४ पछि मुलुक नयाँ राजनीतिक धारमा अघि बढ्नेछ
प्रकाशित मितिः शनिबार, बैशाख २३, २०६९ | 153 Views ||
कृष्णबहादुर महरा [स्थायी समिति सदस्य, एकीकृत नेकपा (माओवादी)
जेठ १४ अर्थात् संविधानसभाको म्याद सकिन अब तीन हप्ता मात्र बाँकी छ अबको तीन हप्तामा संविधान जारी हुन सक्छ ?
सहमतिको अन्तिम प्रयास भइरहेको छ । पछिल्लो चरणको बहस निकै पेचिलो छ र अबको बाँकी तीन हप्तासम्ममा निकै चाप छ । तर कतिपय प्रकृया छोट्याएर संविधान लेख्न सकिन्छ, संविधान बन्नुको विकल्प छैन । मैले संविधान बन्ने सम्भावना नै बढी देखेको छु ।
शासकीय स्वरुप र संघीयताको विषयमा माओवादीको बटमलाइन के हो ?
पार्टीले पहिलेदेखि नै आफ्नो लाइन प्रष्ट पार्दै आएको छ । शासकीय स्वरुपमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पार्टीले दायाँ बायाँ गर्दैन भने संघीय संरचनामा जातीय, क्षेत्रीय पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएर राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य अडान हो, यसमा हाम्रो सम्झौता हुन सक्दैन । उपयुक्त सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने संघीय प्रदेशको संरचना र नामका विषयमा छलफल र बहस गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ होइन ।
तर, पार्टीकै एउटा पक्षले कार्यकारी राष्ट्रपति निरंकुश भनेर तर्क गरिरहेको छ नि ?
राष्ट्रपति निरंकुश नहोस् भनेर हामी त्यसमा छलफल गरौं । अहिलेसम्म देशमा देखिएको अस्थिरता, अराजकता, मनपरीतन्त्र, विकृति र विसंगति अनिश्चितता पुरानै परम्परागत संसदीय तरिकाले हल हुने देखिदैन । र, त्यो तरिकाबाट राष्ट्रिय एकता पनि कायम हुन सक्दैन । देश संघीय संरचनामा जाने भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको आवश्यकता अझ बढी हुन्छ । यसले मात्र देश कन्ट्रोल गर्न सक्छ । त्यो कन्ट्रोल भनेको निरंकुशता भन्ने चाहिँ कदापि होइन ।
संविधान निर्माणसँगै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि उठिरहेको छ, जेठ १४ अघि नै राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना कत्तिको छ ?
सात बुँदे र त्यसपछिका छलफलहरुमा राष्ट्रिय सरकारको कुरा पनि उठ्दै आइरहेको छ । शान्ति र संविधानअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ । संविधानलाई सकारात्मक ढंगले टुङ्ग्याउनमा यसले सकारात्मक सहयोग नै गर्छ । शान्ति र संविधानलाई टुङ्गोमा पु¥याउन जेठ १४ अघि नै राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्छ ।
कांग्रेस र एमालेले शुरुमा शान्ति प्रकृया टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्दै संविधान निर्माण कार्य रोके, अहिले जनसेना र हतियार सेना मातहत गएपछि फेरि बखेडा थापिरहेका छन् यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
संविधान निर्माणको बाधक हाम्रो पार्टी होइन्, कांग्रेस र एमाले नै हुन । संविधानको कुरा नउठाई सरकारको कुरा मात्र उठाए भने उनीहरु जनताबाट मुखमा हेर्नलायक नहुने गरी नाङ्गिनेछन् । सेना समायोजनमा पार्टीले लचकता देखाउनु पार्टीको कमजोरीको रुपमा होइन आजको राजनीतिक आवश्यकता हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
शान्ति प्रकृयाका ६ बर्ष यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? शान्ति प्रकृयाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु बताइदिनुहोस न् ?
बितेका ६ बर्षहरु तीव्र उद्देलनका बर्षहरु भए । द्वन्द्वरत पक्षका राजनैतिक र भौतिक व्यवस्थापन निकै गाह्रो कुरा हो । यो ६ बर्षमा संविधानसभाभित्र र संविधानसभा बाहिर बृहत छलफल भएका छन् । जनसमुदायमा राजनैतिक अधिकारबोधको स्तर माथि उठेको छ । अब संविधान निर्माण पूरा भएपछि तत्कालिन राजनैतिक बहसको अन्त्य भएपनि द्वन्द्वको भौतिक व्यवस्थापनको चुनौती भने बाँकी नै रहनेछ । जसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेना समायोजन प्रकृया लगभग अब टुङ्गिदैछ । यो प्रकृया आत्मसर्मपणको तरिकाबाट टुङ्ग्याइयो भन्ने पार्टीकै एउटा पक्षलको आरोप छ नि ?
सेना समायोजनसम्बन्धी पार्टीले लिएको पछिल्लो निर्णयलाई मैले तत्कालिन स्थितिमा हाम्रो पार्टीले पहल लिएको हो भन्छु । र, हाम्रो बृहत शान्ति सम्झौतामा भएका पछिल्ला सहमतिहरुको स्वभाविक परिणाम हो । त्यो निर्णयका दृष्टिले कमजोरी भएको छैन, व्यवहारिक रुपले कतिपय प्रकृया र प्राविधिक पक्षमा हाम्रो कमी कमजोरी हुन सक्छ त्यसैलाई आत्मसमर्पण भन्न मिल्दैन ।
जेठ १४ पछि शान्ति र संविधानको कार्यनीति सकिएपछि पार्टीले लिने नयाँ कार्यदिशा कस्तो हुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न ?
जेठ १४ सम्म संविधान लेखिसक्ने उद्देश्य राखिएको छ र जेठ १४ पछि निश्चितरुपमा मुलुक नयाँ राजनीतिक धारमा अगाडि बढ्नेछ । राज्यसत्ताले जनताको परिवर्तनको भावनालाई आत्मसाथ गरेर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाका सवालहरुलाई सकारात्मक सम्बोधन ग¥यो भने शान्तिपूर्ण रुपले राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ तर राज्यसत्ताले उपयुक्त भावनाविपरित प्रतिकूल धार पकडेर प्रतिक्रान्तिकारी रवैया अपनायो भने जनताले क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न आफ्नो पहलकदमी कायमै राख्नेछन् ।
जेठ १४ पछि पार्टीभित्रको विवाद फुटतिर जान्छ या जुट्ने दिशातिर ?
पार्टीको अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा एकताबद्ध हुन कठिन जस्तो देखिएपनि राजनैतिक घटनाक्रमको विकासले क्रान्तिको मूलप्रवाहबाट एकताको विकल्प मैले देखेको छैन । पार्टी फुटाउने प्रवृत्ति जनसमुदायको मूलप्रवाहबाट एक्लिने कुरा निश्चित छ ।
ल तर, पार्टीभित्र त फरक संरचना चलिरहेको छ कसरी एक हुन सक्छ ?
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको विरुद्धमा पार्टीविरोधी गतिविधि गर्नु गम्भीर घात हो । यसले अन्ततः उहाँहरुकै साइज घटाउने, उहाँहरु नै कमजोर बन्ने र जनसमुदायबाट एक्लो हुनेबाहेक अर्को केही हुने छैन ।
तपाई पार्टी एकताको लागि पहल गर्दै आएको नेताको रुपमा स्थापित हुनुुहुन्छ तर पछिल्लो चरणमा त्यो पहल नभइरहेको जस्तो देखिन्छ नि ?
मेरो भूमिका हिजो, आज र भोलि पनि पार्टी एकताकै लागि पहल हुनेछ र रहिरहनेछ । यसको अर्थ राजनीतिबाट अलग पार्टी एकताको अर्थ छैन । त्यसकारण शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पु¥याउने राजनैतिक धार नै अहिलेको मूल पक्ष हो । त्यसको वरिपरि नै पार्टी कटिबद्ध हुनुपर्दछ ।
अन्त्यमा नौलो जनउभार साप्ताहिकमार्फत् केही भन्नु छ कि ?
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाको पक्षमा नौलो जनउभार साप्ताहिकले निरन्तर जनतालाई सूसुचित गरि राखोस् यही शुभ–कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
Prevप्रिय साथी !
Nextजेठ १४ मा संविधान आउला ?